खाना खोज्दै सडकमा पुगे यी दम्पत्ति ! बेसहारा दम्पत्तिको दुनियाँलाई रुवाउने कहानी (हेर्नुस् भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/खाना खोज्दै सडकमा पुगे यी दम्पत्ति ! बेसहारा दम्पत्तिको दुनियाँलाई रुवाउने कहानी (हेर्नुस् भिडियो)
आज हामी भोका पेटलाई नि:शुल्क खाना खुवाउदै आइरहेको खुलामञ्चस्थित बसपार्कमा पुग्यौं । एक छाक खान टाढा टाढादेखि आएका लगभग ४०० मानिसहरु टुसुक्क बसेर खाना खाईरहेका थिए । त्यहीं एउटा व्हील चियरमा एक जना बुवा र एक जना आमालाई देख्यौं । बुवा काखमा भात राखेर व्हिल चियरमा हुनुहुन्थ्यो र आमाले पछाडीबाट व्हील चियर गुडाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरुसँग कुरा गर्न भनि हामी उहाँको छेउमा गयौँ । दुई जना श्रीमान श्रीमती हुनुहुदो रहेछ । खाना किन नखानु भएको भनि सोध्दा उहाँले भन्नु भयो, ”अब यो खाना लिएर कोठामा गएर खाने”। उहाँले आफ्नो घर दोलखाको सैलुंग गाउँपालिकामा भएको बताउनु भयो । उहाँका ३ छोरीहरु रहेछन् । २ जनाको बिहे भैसकेको र कान्छी छोरी गाउँमै भएको बताउनुभयो ।’
गाउँमा छदा रुखबाट लडेर बुवाको मेरुदण्ड भाचिएको रहेछ । अहिले व्हिल चियरको सहारामा उहाँका दिन बितीरहेका छन् । उपचारको लागि गत बैशाखमा उहाँ श्रीमतीसँग काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ तर सरकारले घोसणा गरेको लकडाउनका कारण काठमाडौँमै अड्किनु भयो ।
अहिले बागबजारमा एउटा कोठामा बस्दै आउनुभएका उहाँहरु यतै अलपत्र पर्नु भयो । श्रीमतीले नै उहाँको हेरचाह गर्दै आइरहनु भएको छ । बुवालाई दिशा पिशाव आएको केही थाहा नहुने बताउनुभयो । दिशा पिशाव पनि श्रीमतीले नै सफा गर्दै आउनुभएको रहेछ । बुवाको उपचार गर्दा गर्दै ५/६ लाख सकियो र अझै उपचार गर्नुपर्ने छ तर अहिले छ न त पैसा छ न त खानको लागि कोठामा एक दाना अन्न नै ।
केही पनि उपाय नभएपछि भोकले भौतारिदै हिँड्दा उहाँहरु खुलामञ्चको बसपार्कमा आइपुग्नु भएछ । अहिले बुढेसकालमा बेसहारा हुनु भएको छ । यी बुवा आमालाई सहयोगको धेरै खाँचो छ । हाम्रो सानो सहयोगले यी आमा बुवाको उद्दार हुनेछ । आउनुस् यी बुवा आमाको दु:ख र भोगाईलाई थप भिडियोमा हेरौं ।
नेपालको दबाब पछि भारत ह`ट्यो प`छाडि, दशगजा बाट सार्‍यो आफ्नो सुरक्षा पोस्ट !!
भारतको भूमी रक्षा गर्दा गोर्खा सै`निक का स`म्बुर गुरू`ङले कस्मिरमा ज्या`न गु`माए